जाडोयाममा गर्भवतीले के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
जाडोयाममा गर्भवतीले के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
शनिबार, पुस ७, २०७५, ०८:२५:००
प्रश्न: म गर्भवती छु। चिसो मौषममा गर्भवतीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सुनेको छु। तर, के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जानकारी भएन। कृपया यो विषयमा प्रष्ट पारिदिनुहोला। – एस
उत्तर : जाडो महिनामा मानव शरीरलाई सामान्यतया अरु महिनामा भन्दा अलि बढी हेरविचार आवश्यक हुन्छ। त्यसमा पनि गर्भवती महिलालाई विशेष हेरविचार चाहिन्छ।
गर्भ रहेको पहिलो तीन महिना स्वास्थ्यका हिसाबले जटिल अवस्था मानिन्छ। यो समयमा धेरै बान्ता हुने, खान मन नलाग्ने, धेरै कमजोरी महसुस हुने हुन्छ। यी समस्या चिसो महिनामा अझ बढी हुन्छ। त्यसैले यो बेला खानपिनमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।
- डा कुमकुम गुप्ता झा